Dhageyso Dowrada Xasaan Ibnu Thaabit Oo Lasoo Gabagabeeyay. – Calamada.com
Dhageyso Dowrada Xasaan Ibnu Thaabit Oo Lasoo Gabagabeeyay.
calamada August 16, 2016 1 min read
Dowradana oo loogu magac daray Saxaabiga Xassaan Ibn Thaabit Shaacirkii ama Gabyaagii Rasuulka Sallalaahu Caleyhi Wasalam ayaa waxaa 12 kii bishi Shawaal loo furay abwaanada Soomaaliyeed kuwaasoo ka kala yimid deegaano ka tirsan Wilaayaadka dalka Somaliya.
Muddadii bisha ahayd ee Abwaanada ay xareysnaayeen ayaa waxay baranayeen waxyaabo kala duwan oo diinta Islaamka sida kutub fara badan oo caqiido ah iyadoo sidoo kale laga hadlay waxyaabaha ay ka mid yihiin Federaalka Iyo mashruuca Qowmu luudnimo ee kooxda ridada somaliya.
Xafladaasi ayaa si rasmi ah loo soo xiray maalintii shalay oo taaqriikhdu ay ahayd 12 Dulqacda iyadoo Abwaanada ay goobta xafladda ka jeediyeen kalimado kala duwan oo ay ku cabbirayaan dareenkooda ku aadan muddada bisha ah ee ay dowradaasi u socotay.
Musuuliyiin kala duwan oo mujaahidiinta ka tirsan ayaa ka qeyb galay xaflada kuwaasoo ku bogaadiyay Abwaanada inay sii xoojiyaan kaalintooda jihaadka afka ee ay kaga qeyb qaadanayaan jihaadka ka socda bariga Afrika.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Sheekh Xuseen Cali Fiidow.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Sheekh Jaamac Cabdi Salaam.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Waaliga Baay iyo Bakool.
Halkan Ka Dhageyso Abwaanada Wilaayaatka Dalka.
Previous: Shil Gaari Oo Ka Dhacay Duleedka Magaalada Hargeysa.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 13-11-1437 Hijri.